एमाले-माओवादी नेताद्वारा डाक्टर केसी पक्राउको... :: सुजिता कार्की :: Setopati
एमाले-माओवादी नेताद्वारा डाक्टर केसी पक्राउको विरोध
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले डाक्टर गोविन्द केसीको पक्राउको विरोध गरेका छन्।
माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले डाक्टर केसीको पक्राउको विरोध गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनीहरूले अदालतले हतारमा केसीलाई पक्राउ गरेको बताएका छन्। माओवादी नेता श्रेष्ठले अदालतको मानहानीलाई सत्याग्रहीविरुद्ध हतियार बनाइनु नितान्त गलत भएको बताएका छन्।
‘डा•गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानुनको नाममा गरिएको ज्यादति हो।"अदालतको मानहानीलाई सत्याग्रही विरुद्ध हतियार बनाइनु नितान्त गलत छ।फेरि दोहोर्याएर भन्छु,अदालत"भगवान"होइन। राज्यको पुनसंरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो।त्यसको पनि परिणाम हो यो।सम्बन्धित सबैले बुझुन्’, श्रेष्ठले ट्वीटरमा भनेका छन्।
पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेत्री ओनसरी घर्तीले आफू हिजो पनि केसीका पक्षमा रहेको र आज पनि उनकै पक्षमा रहेको बताएकी छन्।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले डाक्टर केसी माग र विरोधको शैलीमा बहस हुनसक्ने भएपनि अदालत जसरी उनी विरुद्ध प्रस्तुत भयो त्यो उचित नभएको बताएका छन्।
पदमा छँदा भनें पनि गरें पनि, आज पनि भन्छु, प्रयास गर्छु, #DrKC का माग ठिक छन्। यसलाई ठिक बिधिमा ढालेर समाधान गर्नुपर्छ ।
— Onasari Gharti (@OnasariGharti) January 9, 2018
‘डा. केसीका माग र विरोधको शैली सम्बन्धमा बहस हुन सक्छ । तर अदालत उहाँको विरुद्ध जसरी प्रस्तुत भयो/ भइरहेको छ, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । काम/ निर्णयमा प्रतिशोध, पूर्वाग्रह या अन्यथा गन्ध भेटियो भने न्यायालयको मान बढ्दैन, उल्टो घट्छ’,उनले ट्वीटरमा भनेका छन्।
एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले केसीको लडाइँ आस्था र मूल्यको भएको बताएकी छन्।
‘न्यायलयप्रति सम्मान र आस्था हुनुपर्छ र छ पनि। तर त्यही न्यायलय र न्यायमूर्तिहरू भने पालैपालो भ्रष्टचारी, दलाल,माफिया र लुटेराहरूलाई चोख्याउदै जाँदा मान गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र श्रीमान ? अनि अवहेलना? हो यस्तोमा अपहेलना हुन्छ। लगाउँ मुद्दा डा केसीहरू आस्था र मूल्यको लागि लड्छन्,’ ट्वीटरमा उनले लेखेकी छन्।
यसअघि केसीको रिहाइको माग गर्दै कांग्रेस नेता गगन थापा सडकमा आएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र विवेकशील साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले पनि केसी पक्राउको विरोध गर्दै उनको रिहाइको माग गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खास्तगी माग गर्दै सोमबारदेखि अनसनमा बसेका केसीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रहरीले सोमबार राति पक्राउ गरेको थियो ।
उनको मुद्दामा सर्वोच्चमा केहीबेरमा सुनुवाइ सुरू हुँदैछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २५, २०७४, ०२:४८:४०